चुलिएको व्यापार घाटा – Chitwan Post
चुलिएको व्यापार घाटा
प्रकाशित मिति: आइतवार, जेष्ठ १९, २०७६
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थव्यवस्था बलियो भएको दाबीसहित आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । उनले बजेट भाषणका क्रममा मुलुक चामत्कारिक आर्थिक विकासतर्फ लम्केको भन्न छुटाएनन् । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सार्थक बनाउन वृद्ध भत्ता बढाएर वा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेरमात्र सम्भव छैन । बजेटले गरिब, मजदुर, किसानलाई सम्बोधन गर्ने खालका के कार्यक्रम ल्यायो, देशवासीलाई उत्साहित पार्ने के योजना तर्जुमा ग¥यो, त्यो नै बढी महŒवपूर्ण हुन्छ । अनिमात्रै देश समृद्ध र जनता सुखी बन्छन् । देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र पनि खुसी हुनुपर्छ । अर्थव्यवस्था बलियो बन्न निजी क्षेत्र पनि लाभान्वित बन्नुप¥यो अनिमात्रै रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना हुनसक्छन् । नेपालको विगतका दृष्टान्तहरुले कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनासाथ बजारभाऊ अस्वाभाविक र अनियन्त्रितरुपमा बढ्ने गरेको देखाएको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कुरा नाजायज होइन । खुसी कर्मचारीबाट राज्यले अधिक लाभ लिनसक्छ । तर, सरकारले मूल्य वृद्धि रोक्न सकेन भने त्यसको मारमा पर्ने गरिब, मजदुर र आमसर्वसाधारण नै हुन् । बजेटले त जनतामा उत्साह बढाउनुपर्छ, चिन्ता होइन ।
सरकारले उत्साहका साथ बजेट सार्वजनिक गर्दा जनताले यो जान्न पाएनन् कि मुलुक के कसरी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ ? र, हरेक नेपालीको थाप्लोमा कति ऋणभार थपिएको छ ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आमाको कोखबाट बाहिर निस्कँदैमा नवजात शिशुले करिब ३६ हजार रुपैयाँ ऋण बोक्न बाध्य हुन्छ । बजेट वितरणमुखी छ । धेरैलाई खुसी पार्ने गरी आएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा अर्थविद्हरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि, युवा स्वरोजगारका नाममा कार्यक्रम, कृषि तथा उद्योगलाई अनुदानजस्ता पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सडक, रेल, पुल, पानीजहाज, विमानस्थललगायत पूर्वाधारका लागि मनग्य रकम विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । विविध आलोचना र विवादका बीच पनि सांसद्हरुलाई खुसी पार्न ४ करोड दिँइदै आएको बजेट बढाएर ६ करोड पु¥याइएको छ । सांसद्लाई दिइएको बजेटको दुरुपयोग भएका, आफ्ना कार्यकर्ता पालनपोषण र कागजी योजनामा रकम खर्च गरिएका दृष्टान्त हुँदाहुँदै सांसद्हरुलाई लुटाउने अभिप्रायले ६ करोड पु¥याएको छ । यो जनताका लागि दुर्भाग्य हो ।
विश्व बैँक र एसियाली विकास बैँकले नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ सम्म ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेकोमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेका छन् । जसअनुरुप नयाँ आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व उठाउने महŒवाकांक्षा राखेका छन् । राजस्व छली गर्ने कम्पनीहरु बढ्दै जाँदा र राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिको महŒवपूर्ण हिस्सा कृषि र पर्यटन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर, पर्यटन विकासका लागि सरकारले यथेष्ट रकम विनियोजन गरेको छैन । नेपालमा अझै ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्बको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा विगत १० महिनाको व्यापार घाटामात्रै ११ खर्ब पुगिसकेको छ । एक महिनाको अवधिमा व्यापार घाटा १ खर्ब ७ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । आयात वृद्धिको तुलनामा निर्यात कमजोर हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको हो । विलासी तथा गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सके धेरै हदसम्म व्यापार घाटा न्यून हुनसक्छ । सरकारले ठूलो आकारको व्यापार घाटालाई कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसले नै मुलुकको परनिर्भरता घटाउन सहयोग गर्नेछ । ऋणले थिचिएको नेपालीको थाप्लो माथि उठाउन पनि सरकारले व्यापार घाटा घटाउने नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ ।
मृत्यु संस्कार– बोधविनाको बहस
ठूला करदाताको घरजग्गा रोक्का गरी लिलामी गर्ने तयारी